शनिबार दिनभर : निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, चेतावनी दिँदै डा.केसीले तोडे अनशन
काठमाडौं, ३० पुस– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले शनिबार सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको हो ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु प्रदेशको उच्च अदालत रहेको जिल्लाको सदरमुकाममा स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । प्रदेश नं.१ को मोरङ, २ को धनुषा, ३ को ललितपुर, ४ को कास्की, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को डोटी जिल्लाको सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
न्याय परिषद्को सचिवालयबाट प्राप्त नामावली अनुसार सात जना जिल्ला न्यायाधीशलाई आयोगले यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारले लागू गरेका नीतिका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका छन् । कन्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा उनले नेपालका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वका धेरै मुलुकमा पुगेर उच्च र सुविधाजनक क्षेत्रमा काम गर्न सफल भएको बताए ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका देउवाले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिवासीको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा उत्तीर्ण भएका २८२ जना विद्यार्थीलाई दीक्षितको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी मुलुकलाई सुशासन र विकास उन्मुख गराउने विषय वाम गठबन्धनका लागि चुनौतिपूर्ण भएको बताएका छन् । देशभक्त गणतान्त्रिक मञ्चले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले मुलुक धेरै अप्ठ्याराहरु पार गर्दै सही बाटोमा आएको भएपनि चुनौति हटिनसकेको बताए । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देश के हुने भन्ने शंका र कयौं अप्ठारालाई पार गर्दै प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि एउटा अवसर र चुनौति दुवै भएको उनको भनाइ थियो ।
डा. केसीले अनशन तोडे– त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रध्यापक डा गोविन्द केसीले १४ औं चरणको अनशन शनिबार तोडेका छन् । सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले छैठौं दिन अनशन तोडेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै केसीले गत सोमबार अनशन सुरु गरेका थिए । अनशन तोड्नुअघि पत्रकारसँग उनले फागुन ८ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा नआए पुनः अनशन सुरु वनी दिए ।
सडक ४ दिन खुला– नारायणगढ–मुग्लिन सडक ४ दिन खुला रहने भएको छ । माघे संक्रान्तिलाई ध्यानमा राखी रातिको समयमा बन्द हुँदै आएको सडक ४ दिन सम्मका लागि खुला गर्न लागिएको हो । पुस १८ गतेदेखिराति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो ।
नतिजा सार्वजनिक– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को नियमित तर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार बेलुकी एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले परीक्षाको नतजिा सार्वजनिक भएको जनाएको हो ।
नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा सार्वजनिक भएको छ । बोर्डले असार १ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षामा ३ लाख ४७ हजार ७४८ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ७४ जनाको परीक्षा रद्धभएको छ भने १ जनाको स्थगित गरिएको छ ।
भाइरल इन्फ्लुएन्जा भएको पुष्टि– जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा तीन सातादेखि फैलिएको संक्रमण भाइरल इन्फ्लुएन्जा भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको काठमाडौंस्थित रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रयोगशालाले बिरामीको नमूना परीक्षणपछि संक्रमण पुष्टि भएको इपीडीमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीआचार्यले जानकारी दिए । यसैबीच स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी नेतृत्वको टोलीले शनिबार रोग प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
सिंजालीलाई नेपाल ल्याइयो– युवा संघ नेपाल रुपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्यामा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लागेका बाबु भनिने तुलबहादुर सिंजालीलाई नेपाल ल्याइएको छ । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार सिंजालीलाई कतार प्रहरीले एक साताअघि पक्राउ गरेको थियो । कतार प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलले सिंजालीलाई शनिबार नेपाल ल्याएको हो । तिवारी हत्याको जिम्मेवारी लिएका र प्रहरी अनुसन्धानबाट मुख्य योजनाकार भनिएका मनोज पुन भने अझै फरार छन् ।
विदेशका खबर– मानवअधिकारको उलंघन गरेको आरोपमा आफ्ना प्रधानन्यायाधीश माथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी निर्णयप्रति इरानले आक्रोस व्यक्त गरेको छ । परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको अमेरिकाले न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै उसले आपत्ति जनाएको हो । अमेरिकी कदमको प्रतिशोध लिने भनेपनि कस्तो कारवाही गर्ने भनेर स्पष्ट नभएको बताइएको छ ।
खेल खबर– नेपाल आर्मी खप्तड गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । कैलालीको धनगढीमा शनिबार भएको खेलमा मनाङ मस्र्याङ्दी क्लवलाई ३–१ गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो । आर्मीका लागि नवयुग श्रेष्ठ, भरत खवास र सन्तोष तामाङले १–१ गोल गरे । मनाङका लागि हेमन गुरुङले १ गोल गरे ।
आर्मीले उपाधिका लागि आइतबार हुने सुदुरपश्चिम ११ र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लवबीचको विजेतासँग खेल्नेछ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक पदमा तीनजना सिफारिश
कक्षा ८ मा अध्ययरत विद्यार्थीले बनाए रोबोट
५२५ जनालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान